Bootstrap 2.3.2: Torolàlana fanombohana | Famoronana an-tserasera
Bootstrap 2.3.2: Torolàlana fanombohana
Sergio Rodenas | | Famolavolana tranonkala
Bootstrap dia Rafitra CSS izay nanjary nalaza be eraky ny tambajotra. Ny fomban'izy ireo manaiky hita amin'ny tambajotra sosialy Tuenti y Twitter. Ny fampiasana an'io dia mamonjy fotoana be dia be amintsika rehefa mamorona rindranasa an-tranonkala satria mamonjy antsika ny asa sy ny ezaka rehetra tafiditra amin'ny famoronana fomba pejy madio izay mety amin'ny fitaovana rehetra. Rehefa dinihina ny fomba nampiasana an'ity rafitra ity, dia ho tsapantsika fa mahazatra antsika izy ireo, hatramin'ny androany dia tranonkala maro no nampihatra izany.
1 Ny firafitra
2 Volavola samihafa ho an'ny fitaovana tsirairay
4 Mametraka Bootstrap
Ny firafitry ny fluid Bootstrap
Mba hahafahan'ny tranokalanay miditra amin'ny finday sy ny takelaka dia tsy maintsy hampiasa ny firafitry ny tsiranoka omen'ny Bootstrap antsika izahay. Ny fampiasana an'ity firafitra ity dia tena tsotra, ny zavatra rehetra dia mifototra amin'ny singa androm izany dia hanampy antsika fisehon'ny ny volavolan-tranonkalanay. Taty aoriana, rehefa mahazo an'ity famolavolana ity avy amin'ny a finday avo lenta o takelaka, ity dia hiova ho azy eo amin'ilay fitaovana voalaza fa manatsara ny kalitaon'ny fitetezana. Hampiasa ny androm miaraka amin'ny kilasy fizarazarana lozika ao anatin'ny firafitry ny tsiranoka, izany hoe:
Izay ny isa 2 dia maneho ny haben'ny span. Ny andalana tsirairay dia misy toerana malalaka ho an'ny 12 spans ny habeny 1, na 2 an'ny habe 6, azo zaraina araka izay itiavanao azy. Raha vao nihoatra ny habaky ny laharana iray dia hidina amin'ny manaraka ho azy izany, ahafahantsika mampiasa a androm habe 12 hamoronana fiatoana tsipika. Raha te handingana ny sasany izahay androm rehefa mamorona iray, izany hoe manomboka amin'ny 4 androm, ary mampihatra habe 3, hampiasa an'ity kaody ity izahay:
Io dia ahafahan'ny fizarana mitsambikina efatra sakan'ny alohan'ny hanehoana ny atiny. Azontsika atao ny mampiasa izany amin'ny safidintsika malalaka, mandingana izay tiantsika amin'ny kaody.
Mandingana ny vanim-potoana miaraka amin'ny kilasy offset
Volavola samihafa ho an'ny fitaovana tsirairay
Kilasy CSS hanavahana ny fitaovana tsirairay
Raha mampihatra famolavolana hafa amin'ny karazana fitaovana tsirairay dia holazainay ny fizarana lojika tsirairay izay fitaovana itodihana azy, amin'ny fampiasana ireto kilasy manaraka ireto:
Amin'izany no ahafahantsika mampiseho famolavolana hafa tanteraka ho an'ny fitaovana tsirairay miaraka amin'ny URL iray ihany.
Lisitry ny bokotra natolotry Bootstrap
Bootstrap dia manome antsika repertoire madio ny bokotra miloko, tsotra be ny fampiasana azy:
izay btn btn-success manondro ny lokon'ny bokotra, raha hanova azy dia tsy maintsy solointsika amin'ny kilasy aseho amin'ny sary teo aloha ihany io.
Ho an'ny fametrahana an'ity rafitra CSS ity dia hampidininay ny rohy avy amin'ny rohy izay avelako eo amin'ny faran'ny lahatsoratra, ary hanoratra ity kaody manaraka ity izahay ao amin'ny lohan'ny fisie HTML anay.
Raha vantany vao azontsika antoka fa ny fisie CSS sy JS dia ao anaty fampirimana mitovy amin'ny fisie HTML, dia afaka manomboka mamolavola ny tranonkalantsika mamaly.
Fanazavana fanampiny - Fanamarinana endrika
Ampidino - Bootstrap: Fram Framework CSS
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Bootstrap 2.3.2: Torolàlana fanombohana
Tsy manana fampianarana momba an'ity rafitra ity intsony ve ianao ???